Uchishandisa zivo yakavhurika kudzivirira iyo Nyowani Tsvene Inquisition | Linux Vakapindwa muropa
Kushandisa ruzivo rwakavhurika kunzvenga Hutsva Bvunzurudzo
Mapiramidhi eEgypt chishamiso chekuvaka, mainjiniya, uye kuronga. Kuvaka nehunyanzvi uye ruzivo rwenguva zvivakwa zvakadaro zvichiri kurarama chiito icho chakanyanya kunetsa kudzokorora. Uye, mumwe haagoni kubatsira asi kushamisika sei vateresi vekuEgypt vasina kudzinga vatongi vavo pavakafunga kutambisa zviwanikwa zvavo pachinhu chisina basa.
Mhinduro ndeyekuti vana pharao vaiziva chinhu chisina anoziva mumwe munhu. Uye pane izvo zvaitsamira kupona kwevagari vayo.
Kwakatangira hupfumi hweEgypt kwaive kurima, uye kurima kwaitsamira paRwizi rweNile.Rwizi rwaNile nguva nenguva rwakazadza mahombekombe enyika, uye kubva pamitero yaro yaitakura makemikari uye marara emiti, yakasiya ivhu rakaorera uye rakagadzirira kurimwa. Iyo pharao ndiyo yega yaikwanisa kuona kuti mafashama aizoitika riini uye sei.
Chakavanzika chaFarao chaive icho zuva rimwe rwizi rusati rwasimuka, nyeredzi Sirius yaionekwa mudenga. Kuti uwane rumwe ruzivo, uku kutaridzika kunoitika mazuva ese mazana matatu nemakumi matatu nemashanu. Kuona kukwirira yaive nyaya yekuita fungidziro zvichibva pakukwirira kwakasvika mumakore apfuura.
Zvingave zvakaringana kuti mumwe munhu atore dambudziko kuti atarise kudenga, kana kuchengeta fomu rekunyoresa kuitira kuti kubatsira kwaharahara kungadai kwakadzikira.
Pakati penhoroondo, kudzora kuwana ruzivo yaive nzira yekuchengetedza simba. Avo vanoiparadzira vasina mvumo vakarangwa. Hazvina kuitika kuti imwe yenhema dzekare ndeye yaPrometheus, akarangwa nekuba moto kubva kuna vamwari kuti aupe kuvanhu. Avo avo, saGalileo, vakadzidza chimwe chinhu chakashora ruzivo rwakabvumirwa, vakaiswa mutirongo nekushungurudzwa.
Iyo yazvino COVID-19 denda yakatidzosera kune iyo nguva yerima. Sekugona kutaura kwaWinston Churchill, wekutanga kubatwa aive chokwadi.
Zvichienderana nemafungiro ezvematongerwo enyika eimwe neumwe, imwe nhanho inotsigirwa kana kwete.ku. Nhamba dzekufa dzinoenzaniswa nemufaro pasina kufunga nezve dzimwe nhamba dzakadai sehukuru hwevanhu, kuwanikwa kwezvimbuzi, mazera, nezvimwe zvinhu zvinoenderana.
Uye zvechokwadi, hatigone kukanganwa nyanzvi. Ivo vadzidzi veyunivhesiti vakazvipira hupenyu hwavo hwese kuchirango uye vasingatenderi chero munhu kunze kwehunyanzvi hwavo kuti vakurukure zvavanokurudzira. Kunyangwe kana ivo vamwe vanhu vaine ruzivo rwakafanana mune mamwe makosi anoenderanawo. Kana, kunyangwe kana chokwadi chichiratidza kuti izvi zvinokurudzirwa hazvina kunaka.
Uye, sezvazvaive zvakaitika kune vafundisi (uye pamwe nemafarao) kuva nevanozvipira vanobatsirana kudivi nechiremera (nekuda kwekuti ndicho chiremera) mune ino nyaya ivo vanotora chimiro chevatapi venhau uye vashandisi vemasocial network vanoda kuranga avo vanofunga zvakasiyana nekushingairira izvo Torquemada pachake angachiva.
Tichishandisa yakavhurika sosi kugadzira edu maonero.
Kana tikakwanisa kutora chidzidzo kubva padenda razvino, ndizvozvo vese vezvematongerwo enyika nevesainzi, zvisinei nemafungiro avo, vari kuishandisa senzira yekumisikidza simba. Ini handisi kutaura nezve rangano dzidziso. Chirwere chiripo. Ndiri kutaura nezvazvo hunhu hwevanhu kutora mukana izvo zvinotipa zvakanakira pamusoro pevamwe. Mune ino kesi kutya.
Y, nzira chete yekurwisa kutya haisi yekuvarega vane monopoly pazivo.
Ehe, handisi kureva kuti amai vemba kana mutyairi wetiraki anogona kuyera pane zvekurapa. Izvo zvavanogona kuita kuona kana matanho akaitwa nevakuru (zvichitevera kurudziro yenyanzvi) aishanda. zvine chekuita nemhedzisiro yazvo uye zvichienzaniswa neizvo zveimwe nyika.
Iyo chaiyo dudziro ye open source es vhura zviwanikwas. Uye izvi hazvingorevi chete kune software kodhi, zvakare kune iyo data. Uye, data senge huwandu hwevanhu vakatapukirwa uye vakaurayiwa neCOVID zviri pachena. Izvo zvakafanana neiyo yekufa kweyakafa makore apfuura uye mamwe akakodzera huwandu hwehuwandu.
Pawebhu pane zvakawanda zvinyorwa zveApplied Statistics zviri nyore kunzwisisa, nepos yemahara software inotipa isu nematanho akanakisa ekuongorora ruzivo.
Zvimwe zvekushandisa zvekufunga nezvazvo
GNU Octave: Chirongwa chemutauro yekugadzira ma graph graphical
Jamovi: Statistical software zvichibva pamutauro wechirongwa R. Iine interface uye nemhando yekushandisa yakafanana neiya yemaspredishiti.
RStudio: Yakabatanidzwa budiriro nharaunda yemutauro wekuverenga R.
JASP: Statistical software yakakura kune vanotanga.
Gretl: Chimwe chirongwa yakanakira vatangi, zvakare yakavakirwa paR uye nekwaniso yekugovana ruzivo neGNU Octave uye maspredishiti.
Explorer: Yakanakira Kuti uongorore diki dhata, chirongwa ichi chine zvakanakisa zvinyorwa nenzira yevhidhiyo dzidziso. Ingo dhonza faira refaira mune fomati yakatsigirwa kuti utange kuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kushandisa ruzivo rwakavhurika kunzvenga Hutsva Bvunzurudzo
Kune avo vanoda kutsvaga zvakanyanya muchokwadi cheicho chakaitika uye chiri kuitika ...
MÉDICOS POR LA TRDAD SPAIN ★ «Press Musangano»
Chikunguru 25 2020
Ichi ndicho chimwe chezvinyorwa zvakanakisa zvandakaverenga pano. Uye hazvisi zveLinux chete uye Mahara Software: Urombo, zvitendero, kusarongeka uye simba rehuwori zviripo nekuda kwechimwe chimiro chepfungwa chevamwe vanhu nekuremekedza vamwe. Mhirizhonga uye kutya zvine zvazvinogumira, uye simba rinoda kuti vanhu vachinje pfungwa, kuti vanhu 'vatende' mune pfungwa dzinoenderana nevashoma.
Ruzivo rwemahara runotisunungura. Munhu akasununguka haazopfugama pamberi paMwari vanofungidzira, haazoshandira anoshandisa mari, haazopa vhoti yake kumunhu ane huwori, haazotengesa kuchengetedzeka kwake nemari shoma shoma, kana kuenda kuhondo kuuraya mumwe munhu. zvisikwa zvaasingatombozive. Munhu iyeye utopia, asi danho rekutanga kuti riite chokwadi ndechekuti ruzivo rwacho rusununguko uye rwakavhurika kune wese munhu anoruda.
FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ akadaro
Iwe haugone kutaura zvimwe uine zvishoma. Isu tinongoda kuzvitenda.
Pindura kuna FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Uye mafarao azvino uno akatakurwa pamusana peavo vakavaita mwari.
Uye vakapfuma nekushomeka kwesoftware yavanomisa muhutongi hweveruzhinji, makoreji nemayunivhesiti. Asi ivo vanowanzoonekwa nguva zhinji sevanopa rubatsiro, vachipa zvipo, kana vari ivo chikonzero chehurombo hunogara nyika zhinji, nekuti dai mari yakaiswa mumarezinesi yakaiswa mukuwana michina uye kupa mukana kune iyo nyika yeruzivo, mumwe aigona ive mamiriro acho ezvinhu.
Nezve software, zvaifanirwa kutaura RKward uye iyo rkteaching pasuru iyo inobatsira zvikuru kunzwisiswa kwehuwandu hwezvinhu.
Maitiro ekutamba Naddando paLinux. Mutambo mutsva weSpanish weC 64
Wakatenga PineTab here? Zvishongedze nemoyo murefu - zvaunotumira zvinononoka vhiki, asi nechikonzero chakanaka